Fonon-tanana vita amin'ny volon'ondry, fonon-tànana vita amin'ny hoditr'ondry, ary fantsom-boankazo, baotin-jaza - Fanshen
Manao vokatra vita amin'ny hoditra
Eo ambanin'ny filozofia famolavolana ny "fahatsorana & fahamendrehana", ny orinasanay dia namolavola fonon-tanana vita amin'ny fonon'ondry hoditra, fonon-tànana hoditr'ondry, satroka, fonon-tsofina ary vokatra hafa.
Indrindra indrindra, Ny fomba tsotra, ny kanto vita amin'ny asa tanana, ary ny hoditra vita amin'ny tànana dia raisin'ireo mpiantsena voditongotra vahiny tsara volo.
Avelao ny mpanjifa hahatsapa ho maivamaivana amin'ireo vokatra ampiasainy
jereo antsipiriany fiantohana kalitao
Piraofilin'ny orinasa :
Shijiazhuang fanshen trade Co., Ltd. natsangana tamin'ny 2002, izay fantatra ho atrikasa momba ny tanana, manome hoditra vita amin'ny hoditra sy fonon-tànana hoditra, satroka ary kojakoja hafa ho an'ny mpivarotra iraisam-pirenena. Nanomboka ny taona 2012, nanova ny orinasanay ho amin'ny famolavolana sy fivarotana ho an'ny mpanjifa vahiny izahay. Nanambola tao amin'ny orinasa iray hamokarana vokatra hoditra sy volom-borona ao an-tanànan'i Gucheng, faritanin'i Hebei.
Ny ekipanay dia nanidina nankany Hong Kong tamin'ny 12,2019 martsa, ary nanomboka fampirantiana 3 andro'APLF. Izay fampirantiana vita amin'ny hoditra, fitaovana ary kojakoja vita amin'ny lamaody, hatao ao amin'ny Hong Kong Convention & Exhibition Center endrika 13 ka hatramin'ny 15 martsa. mizara roa flo ...
Ny orinasanay dia nanamarina tamim-pahombiazana momba ny AUDITED SUPLIER sy BSCI-AUDITED
Tamin'ny faran'ny taona 2019, ny biraon'ny Shijiazhuang an'ny orinasanay dia nitondra ny mpiambina ny orinasa SGS Tianjin Branch, nanao fanaraha-maso an-toerana ho an'ny orinasanay izy ireo, ny atiny momba ny lozisialy dia manondro ny fahazoan-dàlana momba ny fisoratana anarana, ny fisoratana anarana amin'ny orinasa fanondranana, ny ara-bola isan-taona. Fanambarana, ny ...